Bafuna kuphenywe ngokulahleka kwamafayela eMbalenhle | News24
Bafuna kuphenywe ngokulahleka kwamafayela eMbalenhle
ISITHOMBE: nokulunga ngobese Umtholampilo waseMbalenhle osolwa ngokulahla amafayela eziguli.
SEKUQUBUKE izinsolo zokudayiswa kwamafayela eziguli esegunyazwe ukuthola imali yesibonelelo m sikahulumeni sokugula emtholampilo iMbalenhle ese-Unit 3 Imbali.
Lezi zinsolo zalo mkhonyovu zilandela ukulahleka kwamanye amafayela azo iziguli ezilanda imithi nyangazonke kulo mtholampilo.
Lezi ziguli ebeziwotha ubomvu zitshele iphephandaba i-Echo ukuthi ukulahleka kwamafayela azo kulo mtholampilo sekuphenduke insakavukela umchilo wesidwaba.
Zithi okufike kube kubi ukuthi kulahleka amafayela alabo abahola impesheni yokugula noma eyokukhubazeka. Lezi ziguli zithi kumanje sezifuna kungenelele uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ukuze kuphenywe kabanzi ukuthi alahleka kanjani lamafayela.
Esinye seziguli esikhulume naleli phephandaba kepha esingathandanga ukudalulwa igama sithe ukulahleka kwefayela laso sekwenzeke kabili kulo mtholampilo, okokugcina udokotela ugcine esitshele ukuthi abasavumelekile ukuba babhale kabusha imininingwane.
Sikhuluma nephephandaba sithe: “Ngashaywa isifo sohlangothi eminyakeni emibili edlule. Kuthe ngokuhlolwa odokotela, kwatholakala ukuthi angeke ngiphinde ngikwazi ukusebenza. Udokotela owayephethe udaba lwami wangenzela incwadi engangizoyihambisa kaSouth African Social Security Agency (Sassa) ukuze ngihole impesheni yokugula.
“Encwadini angibhalela yona, kwakusho ukuthi sengiyohola impilo yami yonke. NgoNhlolanja (February) walo nyaka ngiyile esibhedlela ngiyolanda imithi ngangaba nankinga. Ngokuqala kukaNdasa (March), ngibuyele khona futhi njengenjwayelo okuyilapho ngifike khona kuthiwa ifayela lami lilahlekile.
“Kunalokho bekunefayela elinamagama ami elingenayo nemininingwane enomlando ngokugula kwami, nencwadi le yokuhola eyayibhalwe udokotela. Ngithe uma ngibuza, kwabhokwa ngolaka kubuzwa ukuthi ngizoyenzani.
“Uma ngibuyela kudokotela ukuthi akangibhalele kabusha incwadi yokuthi kumele ngihole ukuze ngingabi nenkinga, wangitshela ukuthi umthetho omusha awusavumi abhalwe kabusha amafayela njengoba kunobugebengu obuningi.
Ungitshele ukuthi sekuqhutshekwa kulokho okubhaliwe.”
Lesi siguli sithe akukhona okokuqala lesi sigameko njengoba nangaphambilini kwake kwenzeka. Esinye isiguli naso esingathandanga ukudalulwa sithe baningi nabanye abebelahlekelwa amafayela kepha benganaki, baze banaka ngoba sebebona ukuthi baningi abanye.
“Sisola ukuthi kukhona okushaya amanzi. Kungenzeka ukuthi kukhona ukusebenzisana nalabo bezimpesheni noma singazi bayicisha kanjani imininingwane kumafomu. Sikhuluma nje kunabantu abayinqwaba esibaziyo abahola impesheni yokugula kodwa bebe bengenalutho.
“Abanye baze basho ukuthi bazoyifuna kanjani imisebenzi, ikhona imali abazoyithola mahhala. Siyafisa ukuba umnyango ungenelele ngoba akuchazeki ukuthi angalahleka kanjani amafayela. Kwabanye ayalahleka amafayela, bese etholakala emva kwesikhathi esemfonyozekile, kungaziwa ukuthi abehlezi kuphi.
“Asifundisiwe impela ukuthi emitholampilo nasezibhedlela kusetshenzwa kanjani, kodwa sinesiqiniseko sokuthi kukhona okushaya amanzi,” kuphetha ilungu lomphakathi.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo uMnu Desmond Motha uthe: “Umtholampilo awukaze uthole izikhalazo mayelana nokulahleka kwamafayela eziguli. Kunezindlela esenza ngazo ukuqinisekisa ukuthi amafayela eziguli agcinwe ngendlela ephephile.
“Wonke amafayela anamagama nezinombolo zikamazisi weziguli, okwenzelwa ukuthi kungabibikho okusebenzisayo. Yize kunenkinga yokushoda kwendawo yokubeka lamafayela, umtholampilo usuqhamuke nendlela entsha ukuqinisekisa ukuthi amafayela aphephile, futhi atholwa iziguli kuphela nalabo abagunyazwe ukuwakhipha.
“Amafayela agcinwa iminyaka emihlanu, emva kwalokho bese eyalahlwa. Kunolunye uhlelo lokugcina amafayela ukwenzela ukuthi iziguli zingabi nenkinga uma ngabe amafayela azo esegcwele.
“Umtholampilo ulindele ukusebenzisa uhlelo olusha lobuchwepheshe, njengoba sekufakwe namakhompyutha. Uma kukhona iziguli ezikusola njengobugebengu, ziyakhuthazwa ukuba zibekele amaphoyisa kunombolo yawo yamahhala engu- 08600 10111.”